Njem nlegharị anya nke Myanmar na-akpọ òkù: Nwee Enchanted
Home » Na-agbasa News Travel » Njem nlegharị anya nke Myanmar na-akpọ òkù: Nwee Enchanted
Ka afọ ise gachara, Myanmar na-eji akara “Ka Enma Anya” dochie akara ngosi njem nleta ya.
“Ka En Ga-amara Gị” Ihe nlegharị anya ọhụụ nke Myanmar bụ nkwa dị ukwuu dị ka ọkpụkpọ oku. Ọ bụ mmezu. Ọ bụ ebe nchekwa. Ọ bụ oge. Okwu a "mara mma" na-ejide n'obi nke ezi obi nke Myanmar.
Ka afọ ise gachara, Myanmar na-eji akara “Ka Enma Anya” dochie akara ngosi njem nlegharị anya ya. Branddị ọhụrụ ahụ gosipụtara Myanmar dị ka ebe enyi na enyi, ihe mara mma, ihe omimi, na ebe a na-achọpụtabeghị ya.
Emepụtara akara ọhụrụ ahụ na mmata nke Myanmar ugbu a dị ka ebe ndị njem nleta na iji atụnyere ọtụtụ ebe ndị ọzọ. E mere nnyocha na ọnwa Eprel 2018 na Yangon Int'l Airport Departure na nyocha ahụ chọpụtara na mkpado "Be Enchanted" na-egosi ezigbo ahụmịhe ha nwere na ndị Mianmaa - obiọma na nnabata na-ekpo ọkụ ma na-ebupụta oyiyi nke Myanmar ha nwere n'uche - pụrụ iche, kpokọtara / omimi. A na-ahụta tagline ahụ dị mma, na-ekwenye ekwenye mgbe ọ na-akpali mmasi.
N'oge nnyocha ahụ, otu n'ime ndị njem nọ na ọdụ ụgbọ elu Yangon kwuru, sị: “Obodo anwansi a juru m anya maka oge nke abụọ ọ bụla m bịara ebe a. Ndị mmadụ, ọdịbendị na nlegharị anya na-adọrọ adọrọ ”.
Ndị njem na-eji mmụọ nke ihe omimi abịa na Myanmar na amaghị ama na-adọta ndị mmadụ na Mianmaa. Iji nweta ma hụ ihe naanị mmadụ ole na ole hụrụ. Ọ bụ iji jiri anya ha chọpụta ọtụtụ ihe banyere ala a. Ihe ncheta oge ha nọ na obodo a na-emetọ ncheta ha site na onyonyo anwansi na ihe omuma di nma nke mere ya ka o buru ala di nma.
Akara ngosi akara "Mianmaa" dabere na ọdịdị na njirimara nke mkpụrụedemede Myanmar; ihe odide gbara gburugburu na-eme ka ọ bụrụ akara ngosi doro anya nke ọma nke na-akpali mmụọ dị egwu na ịnabata echiche. Mana gafere nke ahụ, mkpụrụedemede, agba, onyonyo yana udidi ahọpụtara gosipụtara ihe ndị bụ isi mmụọ na agwa nke njem na ahụmịhe o kwere nkwa ịnapụta
A ga-eji akara ọhụrụ ahụ mee ihe na ọrụ ahịa nke Myanmar dị ka ihe ngosi njem, ihe ngosi njem njem na ahịa dijitalụ ọ bụla metụtara mmemme nkwado njem / mmemme malite na ụbọchị mmalite.
Dịka mpaghara ikpeazụ nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, mba ahụ chọrọ igosi ihe kachasị mma ọ ga-enye: osimiri mara mma, isi obodo oge ochie, ụlọ nsọ ọla edo, ugwu ndị mara mma, nri na ọdịbendị. Mianmaa nwere ihe maka anya ọ bụla na obi ọ bụla. Mmesapụ aka nke ala ahụ na ndị bi n’ime ya ga-eme ka e jide n’aka na ị nabatara, ọ bụghị dị ka ndị njem nleta kama dị ka ọbịa. Gaa Mianmaa ma nwee mmụọ.
Ndị otu ọhụụ ga - eduga Aliz Hotel Times Square
Jamaica Tourism na-etinye $ 10 nde na International Coastal Cleanup Day
WTTC na WTN na-akwado ịhapụ patents na ọgwụ mgbochi COVID-19